Umhla My Pet » Tips ezintlanu On Indlela Usuku Blind
Ukuthandana inokuba ngamava olunzima. ukuthandana Blind ngaba ukumsusa emnyameni ngobomi olunzima. Kodwa akukho mfuneko bachasele kude amava kumhla iimfama. Ngeke wazi ukuba ngubani usenokudibana.
umthombo othenjiweyo - Ngubani omisela umhla wakho iimfama kunokuba isitshixo ubuzilindile. Ukuba umhlobo wakho uye wacebisa umhla, ukucinga malunga nalapho lo mhlobo ukuze evela. Buza ukuba kutheni ufuna ukuseta ukuba phezulu kwaye bacinga ukuba uhlobo uxhulumaniso uya kwabelana ngomhla wakho. Oku kunokuba inkcazelo exabisekileyo nemvelaphi ukuba xa sidibana nomntu ezintsha okokuqala.
indawo casual - indawo elungileyo umhla oyimfama lula ukwenza. Khetha indawo ongathandani ngobumnandi apho uyazi ukuba alindele. iindawo casual ezifana iikhefu zokutyela zibalasele ukuba umhla oyimfama. Kukho elifutshane iinketho elide ezifana nokubane ukusela kunye nokuba konke kubonwe kakuhle, kumhla ukuya kutsho ngomhla isidlo elide. ngokunjalo, iinketho mnandi umkhulu. Imisebenzi efana igalufa encinane okanye bowling kuba luyolo kwaye flirty ngaphandle sithembele omnye kakhulu kwi incoko enye. Musa ukukhetha iindawo ukuthandana ezifana bhanyabhanya yeqonga njengoko wena uya kufumana ithuba lokuba bafunde nto omnye komnye.
Nxiba ngokufanelekileyo - Ladies baya kufuna khangela ezinamagama ngaphandle kokuba yonke into kuyaboniswa. Into nje kwaye bekhululekile kwaye kakuhle, engazihlambanga. Abantu baya kufuna khangela zetorho kodwa ezinamagama. Musa ukwenza impazamo benxibe into ongafuni ukuba obutofotofo njengoko oku kuya kubonisa ngalo imo yakho ngomhla
ukuncokola ngokuzithemba – Yiba wena kunye nokubonisa ngawona oko ekwenza ezikhethekileyo. Kodwa musa ukulibala ukucela mininzi imibuzo malunga nomhla lwakho, kuba nomdla ebomini babo nokudala ngendibaniso ezintle. Ukuba wadibana ngokusebenzisa datemypet.com, ukubonisa eyona buddy yakho pet njenge umdla eqhelekileyo usenokuba. Ukuphawula umdla zakho ozithandayo ashiye nayiphi incoko imbali ubudlelwane emnyango.
Yiba nembono entle - Qiniseka ukuba ukuzeyisa yakho encumile komhla oyimfama. Vuyani ukuba uzifaka ithuba ukuhlangabezana umntu omtsha uhambe nje ukuhamba. Eyona nto ibalulekileyo ukuze umhla olukhulu ukonwaba kunye loveable, ngoko ke wena uze unandiphe nomhla wakho oyimfama.